» “टिकटकबाट करोडौं कमाए, भन्नेहरुको वास्तविकता बाहिरियो । बिजय शाही, जस्तै दुनियाँ झुक्याउन खोजेका हुन त ? (भिडियो हेर्नुस)” “टिकटकबाट करोडौं कमाए, भन्नेहरुको वास्तविकता बाहिरियो । बिजय शाही, जस्तै दुनियाँ झुक्याउन खोजेका हुन त ? (भिडियो हेर्नुस)” – हाम्रो खबर
“टिकटकबाट करोडौं कमाए, भन्नेहरुको वास्तविकता बाहिरियो । बिजय शाही, जस्तै दुनियाँ झुक्याउन खोजेका हुन त ? (भिडियो हेर्नुस)”
“यतिबेला टिकटक निकै लोकप्रिय बन्दै गईरहेको छ । टिकटकमा भिडियो बनाउसने कला देखाउने त छदैछ झनै हिजो आज लाईभ आएर गिफ्ट माग्ने, गेम खेल्नेहरुको लहर नै लागेको छ ।”
“समान्य मान्छे मात्रै हैन देशका नाम चलेका सेलिब्रेटीहरु पनि टिकटक लाईभमा आएर गिफ्ट माग्दै खेल खेलिरहेका छन् । पछिल्लो समय केहि टिकटकबाट करोड कमाए भन्दै मिडियामा आएपछि पुण्य गौतम पनि लाईभमा आए ।”
“त्यसपछि लाईभ बस्नेहरुको लर्को नै लाग्यो । टिकटकबाटै पैसा कमाईने रहेछ भन्ने थाहा पाएर सबै यो लयमा छन्” धेरैलाई टिकटकबाट पैसा कमाइन्छ भन्ने कुरामा बिश्वास छैन । धेरैले यो नभएको हल्ला चलाएको भन्दै केहि लाईभ होस्टरहरुलाई गाली पनि पनि गरिरहेका छन् ।
कतिले बिजय शाहीले जस्तै नचाहिदो हल्ला चलाएको भन्दै यसलाई सरासर गलत भएको पनि बताउँदै छन् । यसैबिच शिशिर भण्डारीसँग कुरा गर्दै एक लाईभ होस्टरले वास्तविकता बताएका छन् । उनले आफ्नो दैनिक कमाई देखाउँदै यस्तो भने । भिडियो हेर्नुस